Rakhine – ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး အင်န်ဂျီအိုများ မစွက်ဖက်ရန် ဥရောပမြန်မာများ ထုတ်ပြန် | MoeMaKa Burmese News & Media
အစုိုးရ၏မီဒီယာအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများအား ကန့်ကွက်သည့် Myanmar Journalist Network ထုတ်ပြန်ချက်
စည်သူလင်း ● ကရင်ဒေသတွင် အဆင့်မြင့်ဆန်စက် ၃ဝ ဆောက်ရန် ကူညီရေးအဖွဲ့တစ်ခု ကမ်းလှမ်း
ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ခြမ့်ခြိမ့်သဲကျင်းပ
ရွှေတွံတေးဆရာတော် ရခိုင်ဒုက္ခသည်များအတွက် အထူးတရားပွဲကျင်းပ
U Win Tin Foundation - ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖောင်ဒေးရှင်းသတင်း
Rakhine – ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး အင်န်ဂျီအိုများ မစွက်ဖက်ရန် ဥရောပမြန်မာများ ထုတ်ပြန်
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး အင်န်ဂျီအိုများ မစွက်ဖက်ရန် ဥရောပမြန်မာများ ထုတ်ပြန်
မိုးမခသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၁၂
လက်ရှိ ရခုိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော နယ်စပ်ဒေသ အဓိကရုဏ်းတွင် အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့ ၃၁က အညင်းပွားနေသော ဘင်္ဂါလီလူမျိုးစုများများအပေါ် သဘောထားထုတ်ပြန်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ဥရောပရောက် မြန်မာများက ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
NGOs ၃၁ ဖွဲ့၏ မြန်မာ လ.၀.က ဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ တောင်းဆိုသည်ကို တုန့်ပြန်ချက်။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဆယ်စုနှစ် ၂ စုကျော်ကျော် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများ အနေဖြင့် လူနည်းစု ပြဿနာကို အလေးအနက်ထားရှိပါသည်။ ပထမဆုံး ပြောလိုသည်မှာ မကြာခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရခိုင်အရေး အခင်းကိစ္စသည် ၂ ဦး ၂ ဖက်မှ ရာဇ၀တ်မှု့ ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်သာဖြစ်ပြီး လူမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေးအပေါ်မှာ အခြေမခံပါ။ ဥပဒေမဲ့မှု့၊ လာဒ်စားမှု့တို့ကို ကျင့်သုံးခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်ချုပ်လာသည့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်မှာသာ တာဝန်ရှိပါသည်။
(၃၁) ဖွဲ့သော နိုင်ငံခြား NGOs အုပ်စုအတွက် မေးခွန်းကတော့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း နေရာယူထားသည့် စစ်တပ်နှင့် ၄င်း၏မိတ်ဆွေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက NGOs များ၏ အဆိုပြုချက်ကို နားထောင်လက်ခံ ပါ့မလား?? နားထောင်မှာ မဟုတ်သာသေချာသည်။ အဲ့ဒါကိုလည်း NGOs အသိပင်။ ဒီ (၃၁) ဖွဲ့သော NGO အုပ်စုက လွှတ်တော်ထဲမှာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည့် အတိုက်အခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး တွန်းအားပေးနိုင်မည်လို့ယူဆလျှင် ဒီ NGOs တွေမှာ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီဆိုတာကို ထောက်ပြချင်ပါတယ်။ အကယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကောင်းမွန်စွာဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံဖြစ်နေပြီဆိုကြပါစို့ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ ဥပဒေပြုသူများသည် ၄င်းတို့ မဲဆန္ဒရှင်များ၏စကားကို နားထောင်ရမည်လော သို့မဟုတ် တိုင်းတပါးက NGOs အုပ်စု၏စကားကို နားထောင်ရမည်လော ဆိုသည်မှာ စဉ်းစားရန်ရှိသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဆိုသည်မှာ သူရဲ့မူလအဓိပ္ပာယ်အရ ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒကို ပြည်သူလူထု ကိုယ်စား အကောင်အထည်ဖော်ရန် တာဝန်ရှိသူများသည်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကို NGOs များအနေဖြင့် သိရှိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ နောက်တချက်ကတော့ ပါလီမာန်အနေဖြင့် လ.၀.က ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကိစ္စကို ဆွေးနွေးမည် မဆွေးနွေးမည်ကို မသိရသေးဘဲ ဒီဥပဒေဟာ ဘာတွေထည့်ဆွေးနွေးမည်ဆို တာကို အကြံပေးတာ ပညာရှိမဆန်ပါ။ လက်တွေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေသည် မည်သည့်လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု ဤအခွင့်အရေးများကိုမှ အာမ မခံပါ။
အကယ်၍ ဤ NGOs များအနေဖြင့် သူတပါးတိုင်းပြည်များ၏ ဥပဒေပြုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်စွက်ဖက်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆပါက၊ ၎င်းတို့အနေဖြင့် မိမိတို့နေထိုင်သော တိုင်းပြည်အသီးသီးတွင် ဥပဒေပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ၌ မည်မျှပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ဖူးပါသလည်း။ မိမိကိုယ် မိမိ မေးခွန်းထုတ်ရန်ရှိသည်။ ပိုမိုဆိုးရွားသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်အတိုင်း လ.၀.က ဥပဒေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အစိုးရနိုင်ငံများမှ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသည်ကို သတိပြုသင့်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအင်အားကြီး နိုင်ငံများသည် R2P (Responsible2Protect) ဟု ခေါ်သော စစ်ရေးအရ ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းခွင့် ဥပဒေကို အသုံးချပြီး Libya နိုင်ငံကို ကျူးကြော်သိမ်းပိုက်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိ Syria နိုင်ငံ၏ ပြဿနာတွင် ဤဥပဒေ အကြောင်းကို ထည့်တွင်း စဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ အကယ်၍ ဥပဒေ တစ်ရပ်သည် နိုင်ငံတကားအဆင့်ဖြင့် သက်ရောက်ရှိရမည်ဟု ယူဆပါက ဤ NGOs များအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂကို မေးခွန်းထုတ်သင့်ပါသည်။ ထုတ်ကော ထုတ်ဖူးပါသလား??
ဤနေရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ပြောလိုသည့်အချက်မှာ ကမ္ဘာမှာ ပြီးပြည့်စုံသည့် ဥပဒေမရှိပါ။ သို့သော်လည်း ဥပဒေတိုင်းသည် မိမိနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရမည်သာဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ဥပမာ တစ်ခုကတော့ ကမ္ဘာ့အင်းအားအကြီးဆုံး၊ ဒီမိုကရေစီ အထွန်းကားဆုံး အမေရီကန်နိုင်ငံမှ ယနေ့ထုတ်ပြန်ထားသော အမျိုးသားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေ (NDAA, National Defense Authorization Acts) နှင့် တိုင်းတပါးသား မွတ်စလင်များကို ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသော Guatanamo အကျဉ်းထောင် ကိစ္စတို့ဖြစ်ပြီး။ အမျိုးသားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေသည် အမေရီကန်နိုင်ငံ၏ အဖွဲ့အစည်း အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ပြီး၊ Guatanamo အကျဉ်းထောင်သည် နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာရောက်သည်ကို ဤ NGOs များအနေဖြင့် သိပါသလား။
သိသည်ဆိုပါက NGOs များအနေဖြင့် ဥပဒေမူကြမ်းများ အကြံပြုချက်များ အမေရီကန်အစိုးရကို ပေးပို့ခဲ့ဖူးပါသလား။ အမေရီကန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားထက် တိုင်းတပါး NGOs များ၏ အကြံဥာဏ်ကို လက်ခံလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မယူဆပါ။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ဆန္ဒကို မလေ့လာပဲ ဤ NGOs များအနေဖြင့် မိမိတို့ ထင်ရာ မြင်ရာများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝ အခြေအနေကို မလေ့လာဘဲ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နေပါက မိမိတို့၏၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး ကူညီဆောင်ရွက်မှုများသည် အလဟဿ ဖြစ်နေမည်သာ ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သတိပေးလိုက်သည်။
Central Working Committee Working Committee
1. U Aung Than Oo (Germany) 1. Dr. Moe Moe Hnin (Belgium)
2. U Hla Myint Naing (The Netherlands) 2. U Nai Htor Oo (Denmark)
3. U Htay Tint (The Netherlands) 3.U Htin Kyaw Lwin (France)
4. U Kyaw Thwin (Norway) 4. U Ko Htwe ( France )
5. Dr. Than Htike(Poland) 5. Ashin Zawana
htikemaungthan@gmail.com (The Netherlands)
6. U Maung Maung Aung (UK) 6. U Moe Kyaw (The Netherlands)
7. Daw Ohnmar Oo (UK) 7. U Myat Thiha (The Netherlands)
8. Sai Mya Han
9. Set Myo Oo (The Netherlands)
10. U Kyaw Thu King (Norway)
11. Ko Thant Zin Htike (UK)
12. Mr L Goon Tawng ( UK)
13. Mr Chris (alias)
Ring Du Lachyung (UK)
14. U Hla Win ( Maesod )
U Htay Tint (The Netherlands) +31206403687 +3168151 9399
Daw Ohnmar Oo (UK) +447727236419
Tags: ဘင်္ဂါလီ, ရခိုင်, ရခိုင်, ရခုိုင်
စမ်းချောင်းဘိုဘိုနဲ့ ရခိုင်ဒေသရောက် အင်တာဗျူး – Myanmar Now (0)
>BBC withdrew controversial Burmese map from their website (0)
ကေဇွန်နွေး၊ Myanmar NOW – ရန်ကုန်ရောက် ကမန် ၂ဝ နေရပ်ရင်းပြန်ရန် ဆန္ဒမရှိ (1)
6 Responses to Rakhine – ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး အင်န်ဂျီအိုများ မစွက်ဖက်ရန် ဥရောပမြန်မာများ ထုတ်ပြန်
ကျောက်လုံး on July 14, 2012 at 4:51 am
ဒီNGOs ဆိုတဲ့အဖွဲတွေဟာ ပိုက်ဆံသာပေးလိုကတော့ ဘာမဆို အရူးချေးပန်းလျောက်လုပ်ကြတဲ့
အဖွဲ့တွေပါ။ဒီအဖွဲတွေမှာ လုပ်နေကြတဲ့လူတွေဟာ အများအားဖြင့် ကိုယ်ကျိူးရှာသမားတွေ များပါ
Ar Re Yan Saw on July 14, 2012 at 12:13 pm
Go away NGOs from the Arakan state. Thank you so much Forum of Burma in Europe. We don’t want NGOs. Back off From Arakan state.
Luksai on July 14, 2012 at 12:52 pm
ထောက်ခံသည်။ တို့ နိုင်ငံရဲ့ အရေးကို ဒီ NGOs တွေ ၀င်မစွက်ဖက်သင့်ပါ။ ခွင့်လည်းမပြုပါ။
pnwara on July 14, 2012 at 2:01 pm
I agree and support this statement. we have responsibility to protect our land.
Kyaw Zin Oo on July 14, 2012 at 7:46 pm
There is no international legal obligation to follow the INGO/NGO’s instruction by governments. These groups are basically Interest group that has been lobbied by Rohingyas working in those countries. Parliaments is obliged to follow suit with people’s desire and politics and fully represent people of country and reflect the people’s politics. As long as different sorts of people are objecting the idea of Rohingyas in Burma, there is absolutely no reason to amend the current Immigration law favoring ROhingyas by Burmese Parliament. These Rohingyas are Bengladeshi who secretly entered Burma and trying to proliferate on Myanmar(Burmese)soil. That is the bottomline understanding of Burmese people. Period.
မောင်းနိုင် နိုင် ၀င်း on July 17, 2012 at 10:57 pm
NGO ဆိုတာ NGO အလုပ်လုပ် ၇ မှာပါ. နိုင်းငံရေး မှာဝင်ပါလို.မရပါဘူး။
တကယ်တော. ၄င်းNGO ၀န်ထမ်းတွှေဟာ ပိုက်းဆံပေး ရင်းအကုန် ခိုင်းလို.ရ ပါတယ်. မယုံရင် ပိုက်ဆံများများပေး project ဆိုပြီး ကုလားတွှေကို အဆိပ် ခတ် သတ်ခိုင်းကြည်.။ သူတို. သတ် မှာပါ။